Onye enyemaka Google ga -enwe interface ọhụrụ n'oge adịghị anya Androidsis
Onye enyemaka Google bụ ihe dị mkpa ugbu a na atụmatụ Google. Ya mere, anyị na -ahụ otu na -enweta ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ ma ọ bụ etinyere n'ime ọtụtụ ọrụ. Google na -arụ ọrụ na atụmatụ ọhụrụ maka ya, nke oge a na -aga site na ihe ngosi ọhụrụ iji gosipụta na ekwentị gam akporo anyị. Mgbanwe ụfọdụ na -amalitelarị.
N'okwu a, ọ bụ interface dị mfe ma dị ọcha. Firmlọ ọrụ a ga -ewepụta ihe ngosi pere mpe maka onye enyemaka Google, na -eso ọtụtụ mgbanwe ewepụtara na ngwa na ọrụ ndị ọzọ n'ọnwa ndị na -adịbeghị anya. Na mgbakwunye na iwere obere oghere n'ụzọ a.
N'ụzọ dị otu a, mgbe anyị mepere ma ọ bụ kpọkuo onye enyemaka Google na mbụ, ga -ewepu oghere na ihuenyo. Ka ọ dị ugbu a mgbe anyị kpọrọ ya anyị nwere ike ịhụ na ọ na -ewe ihe dịka ọkara ihuenyo. Firmlọ ọrụ ahụ ga -agbanwe nke a ka ọ nwee naanị akụkụ ya, na ala. Ọ bụghị naanị mgbanwe.
Mgbe anyị mepere ya nke ọma, ka anyị na ya wee nwee mmekọrịta, anyị nwekwara ike ịhụ mgbanwe. Mbụ, ga -akwụsị ịnwe ihuenyo niile, na -eme ọnụọgụ nke ọtụtụ, mana anyị ga -enwe ike ịhụ ọdịnaya dị n'azụ ya. Ke adianade do, ọ na -agba mbọ ka a ọzọ kọmpat imewe.
Enwekwara ike ịhụ na afụ ndị na -emebu dị ka afụ okwu ga -apụ n'anya na nke a na mkparịta ụka. Ihe ọhụrụ Google Assistant interface a Egosiputara ya na Google I / O 2019. Agbanyeghị na ugbua enyebeghị ụbọchị maka iwebata ya n'ihu ọha. Nnwale ndị a na -aga n'ihu ugbu a.
Ya mere, anyị ga -echere ntakịrị oge ka anyị nwee ọmarịcha atụmatụ ọhụrụ a na enyemaka Google. Mwepụta ya nwere ike dabara na mbata gam akporo Q, nke ahụ na -eweta mmegharị ọhụụ iji mepee ya. Yabụ ọ bụrụ otu a, anyị ka nwere ọnwa ole na ole ichere na nke a. Anyị ga -ege ntị na akụkọ n'okwu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google Assistant ga-enwe ọhụụ ọhụrụ n’oge na-adịghị anya
Nke a bụ otu ihe onyonyo nke Oukitel Young Y4800 ga - esi mee ka anyị yie